Jwxo-shiil, oo Loo Sheegay in uu Iskaga Baxo Dalka Ingriiska – Rasaasa News
May 22, 2011 Jwxo-shiil, oo Loo Sheegay in uu Iskaga Baxo Dalka Ingriiska
London, May 22, 2011 [ras] – War aanu ka helay ilo xog ogaal ah oo aad ugu dhaw qoyska Jwxo-shiil, ayaa waxay noo sheegeen in laba sarkaal oo ka socda ciidanka Booliska ee dalka Ingriiska ee loo yaqaan [scotland yard] ay tageen guriga Jwxo-shiil.
Waxaa laga wariyey ilahaas in Boolisku ay waydiiyeen Jwxo-shiil, hanaanka uu dalka ku soo galay, waxayna ku wargaliyeen in uu si deg deg ah uga baxo dalka Ingriiska, sababo la xidhiidha nabad galiyada.
Jwxo-shiil, ayaa mar hore loo sheegay in uu haysato passport-ka Ingiriiska, laakiin uu joogo dalka Eritrea ee baasaboorkiisa haysto. Maadaama ay jiraan arimo shaki ku lug lahaansho ururada xag jirka ah iyo waliba dhibaatooyin uu ka dhex abuuray bulshada ka soo jeeda gabalka Ogaden ee degan dalka Ingriiska.
Gacan qaadyo dhawra iyo dhibaatooyin la xidhiidha Jwxo-shiil, ayaa ka dhacay dalalka Yurub, oo afar ka mid ah ay ka dhaceen dalka Ingriiska.
Laba mar ayaa laga hor istaagay Jwxo-shiil, goobo uu shir ku qaban lahaa, isaga oo lagu eedeeyey in uu yahay gacan ku dhiigle.
Waxaa kale oo jirta in dhawr wadan oo Yurub ah iyo dalka Maraykanku ay u diideen ogolaanshaha dal ku galka.
Intaa wixii ka dambeeyey Jwxo-shiil, waxaa hoy u ahaa dalka Eritrea, hakaas oo ay gabaabsi haantan noqdeen hawlhii uu ku jiray.
Jwxo-shiil, ayaa bishii April, ka degay dalka Jarmalka isaga oo ka soo kicitimay dalka Eritrea, halkaas oo uu kula kulmay saraakiil Ethiopian.
Jwxo-shiil, ayaa la sheegay in dalka Ingriiska uu ku galay gaadhi ka soo qaaday Jarmalka, kaas oo ayna boolisku joojin, balse ay ogaadeen in uu dalka Ingriiska galay.Waana arinta keentay in Booliska Ingriisku ay guriga ugu tagaan Jwxo-shiil.
Sharciga dalka Ingriiska ayaa ogol ruuxa dhalasho la siiyo, ee ay soo eedeeyaan dalalka reer galbeedku, balse aan wax cad lagu haynin in dal sadexaad loo masaafuriyo inta ay xidhmayaan hawlaha uu ruuxaasi ku jiro.
Lama oga xiliga ay Jwxo-shiil, Boolisku ku amreen in uu dalka ka baxo, waxaase la sheegay in uu dhakhso uga bixi doono Ingriiska, kolka ay u dhamaanto balamo uu la leeyahay Isbitaal.